धनीहरुको आफ्नै संस्था गरिव कसरी भयो ? - Rojgar Manch
धनीहरुको आफ्नै संस्था गरिव कसरी भयो ?
गैरआवासीय नेपाली संघ भन्ने वित्तिकै धनीहरुको संस्था भनेर चिनिन्छ । त्यही विश्वभरका धनीहरुको छाता संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ भने यतिखेर टाट पल्टिएको छ । संस्था चल्न नसकेर अहिले करोडौ ऋणको भारी बोक्न बिबस छ ।
विश्वमा रहेका एनआरएनहरुबाट पैसा उठाएर निमार्ण गरेको एनआरएन भवन अहिले भाडामा पनि लगाइएको छ । बालुवाटारमा रहेको एनआरएन भवनको पहिलो र दोश्रो तला नेपाल राष्ट्र वैंकलाई भाडामा लगाएको एनआरएनका अधिकांश अगुवाहरु मन परेको छैन ।
एनआरएनका निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेको कार्यसमितिले झण्डै आधा अर्ब संस्थाको कोषमा छोडेर वर्तमान अध्यक्षलाई सुम्पिएपछि कोषको पैसा कसरी स्वाहा भयो ? एक एनआरएनको आक्रोष थियो ।
घलेको नेतृत्व पाएको एनआरएनले आफ्नो कार्यकालमा यतिधेरै सफलता दिलाएकी विश्वभरका नेपालीहरुको ढुकढुकी नै बनाए । नेपाल र नेपालीको दिलमा एनआरएनहरु गफ मात्र होइन काम नै गर्दा रहेछन् भनेर घलेले पुष्टी गरिदिए । घलेले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थाप्रतिको इमान्दारिताको नमूना नै प्रस्तुत गरे , चाहे महाभूकम्पको पीडामा लाप्राकमा नमूनाबस्ती निमार्ण, उद्धार तथा सहयोग, एनआरएन भवन निमार्ण, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष खडा गर्ने अनगिन्ति काम भए ।
एनआरएनको संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विश्वका नेपालीलाई एक सुत्रमा बाधेर शुरु भएको एनआरएन अभियानले आज ठूलोरुप लिइरहेको छ । महतोपछि नेतृत्व गर्न आएका जापानका देवमान हिराचनले कुनै उचाईमा पु¥याउन सकेनन् । उनले उल्टो एनआरएन संस्थाको नाम भजाएर सामूहिक लगानी भन्दै विश्वका नेपालीबाट करोडौं उठाएर विचल्लीमा पारे । त्यही भएर होला उनी अहिले एनआरएन अभियानमा नाकमुख देखाउँदैनन् । उनी अहिले पलायन सोसरह छन् ।